एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहा`स भएकी बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ ? – रेखा थापा – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहा`स भएकी बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ ? – रेखा थापा
काठमाडौं। रुकुममा आफ्नी प्रेमिका लिन भनेर गएका नवराज विक र उनका साथीको गरिएको नि’र्मम ह’त्याको अनु सन्धान यतिबेला चलिरहेको छ। दलित भएर ठकुरी युवती संग प्रेम गरेकै कारण ह’त्या भएको बताई`एको केसको यतिबेला अनुसन्धान भैरहेको छ। बाँकी नतिजा अनुसन्धान पछी थाह होला।
तर यतिबेला सामा`जिक संजालमा घट’नामा जोडिएकी सुष्मा मल्ललाई लिएर अनेक टिका टिप्पणी भैरहेका छन्। उनको चरित्र ह’त्या गर्ने खाल`का कमेन्टहरु समेत आईरहेका छन्।
अनेकन टिप्पणी आ`इरहेका बेलामा अभिनेत्री रेखा थापाले कसैको पनि चरि’त्र ह’त्या गर्ने आ`धिकार कसैलाई नभएको भन्दै आ’क्रो’श व्यक्त गरेकी छिन्। उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा घ`टनाका दो’षीलाई तुरुन्त कार’वाहीको माग गर्दै बालि`काको चरि’त्र ह’त्या नगर्न लेखे`की छिन्।
यस्तो छ रेखा`को स्टा`टस:
रुकुम घट’नाका दो’सी माथि कर्वा’ही र पी’डि’तलाई अबि लम्म्ब न्याय दियियोस । यस घ’टनामा जोडीएकी शु`श्मा मल्लको बारेमा जसरी चरि’त्र ह’त्या गर्ने खालका र नारी अस्मिताको ध’ज्जी उडाउने काम भएको छ, तेस्ले फेरि`पनी उत्पी’डित वर्ग माथि प्र’हा’र भयो भन्ने लाग्छ । एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ त? दो’षिलाई कानुनी कार्वा’ही हुनु पहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सामा`जिक र चारि`त्रिक सम्पत्ती बजारमा ली`लाम गर्नु पर्ने ? नेपा`लमा केटी मान्छेको बे’इज्यत गरेर न्याय पाउने हो र?